35 Ala ịkpa na ógbè mmiri na-adịghị ga-enwe aṅụrị,+ mbara ọzara ga-aṅụrị ọṅụ, waakwa okooko dị ka okooko safrọn.+ 2 Ọ ghaghị ịwa okooko,+ ọ ga-aṅụrịkwa ọṅụ nke ukwuu, tiekwa mkpu ọṅụ.+ A ga-enye ya ebube nke Lebanọn,+ na ịma mma nke Kamel+ na nke Sharọn.+ A ga-enwe ndị ga-ahụ ebube Jehova,+ bụ́ ịma mma nke Chineke anyị.+ 3 Meenụ ka aka na-adịghị ike dị ike, meekwanụ ka ikpere na-ama jijiji sie ike.+ 4 Sịnụ ndị na-echegbu onwe ha:+ “Dịnụ ike.+ Unu atụla egwu.+ Lee! Chineke unu ga-abịa ịbọ ọbọ,+ Chineke ga-abịa ịkwụ ụgwọ.+ Ya onwe ya ga-abịa zọpụta unu.”+ 5 Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì,+ a ga-emeghekwa ntị nke ndị ntị chiri.+ 6 Mgbe ahụ ka onye ngwọrọ ga-awụli elu dị ka oké ele,+ ire onye ogbi ga-etikwa mkpu ọṅụ.+ N’ihi na mmiri ga na-agbapụta n’ala ịkpa, mmiri iyi ga na-agbapụtakwa na mbara ọzara. 7 Ala kpọrọ nkụ ga-adị ka ọdọ mmiri nke ahịhịa amị jupụtara, ala mmiri na-adịghị ga-adịkwa ka isi mmiri.+ Ahịhịa ndụ na ahịhịa amị na ahịhịa papaịrọs+ ga-adị n’ebe nkịta ọhịa na-ebi,+ bụ́ ebe ha na-anọ ezuru ike. 8 Okporo ụzọ ga-adị n’ebe ahụ,+ ee, ụzọ ga-adị; a ga na-akpọ ya Ụzọ nke Ịdị Nsọ.+ Onye na-adịghị ọcha agaghị esi na ya gafee.+ Ọ ga-abụ maka onye na-eje ije n’ụzọ ahụ, ọ dịghịkwa ndị nzuzu ga-awagharị na ya. 9 Ọ dịghị ọdụm ga-anọ n’ebe ahụ, ụdị anụ ọhịa ọ bụla nke na-adọgbu adọgbu agaghị abata na ya.+ Ọ dịghị nke a ga-ahụ n’ebe ahụ;+ ọ bụ ndị a gbatara agbata ga na-eje ije n’ebe ahụ.+ 10 Ndị Jehova gbapụtara ga-alọta,+ tirikwa mkpu ọṅụ bata na Zayọn;+ ha ga na-aṅụrịkwa ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi.+ Ha ga-enwe obi ụtọ na ọṅụ, iru uju na ịsụ ude ga-agbafu.+